အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ကြွက်များ - ကျောင်းကကလေးများအတွက်သင့်လျော်သော?
ကြွက်ကျောင်းမှအသက်ကလေးများများအတွက်စံပြအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသာကလေးတွေသေးငယ်တဲ့ကြွက်နှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏အထိခိုက်မခံကုသမှုနှင့်အတူနေ့စဉ်အဆက်အသွယ်သင်ယူစောင့်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ကြွက်နေ့စဉ်ပုံမှန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတောင်းဆိုအပေါင်းတို့နှင့်အပြောင်းအလဲတစ်ခုအထက်။
Rumzappeln တဲ့အခါမှာသူတို့ကဥပမာထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်မမှန်ကန်ကြောင်းကိုင်တွယ်အတွက်အစာရှောင်ကြိမ်ကျဆင်းသွားနေကြသည်။ ခအမြီးအဓိကဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် Pull ။ ကြွက်ထို့ကြောင့်သင့်လျော်မဟုတ်အလွန်ငယ်ရွယ်သားသမီးတို့အဘို့, မကြမ်းအပြုအမူသပိတ်မှောက်နှင့်အတူသားသမီးတို့အဘို့။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်မူလတန်းခေတ်ကလေးများသည်အမှုဆောင်ကြွက်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းပတ်လည်ရှိကလေးများပိုမိုပုံမှန်မဟုတ်သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အကျိုးစီးပွားတိုးပွားစေပါသည်။ ယုန်နှင့်အ guinea ဝက်အကျိုးစီးပွား၏ဗဟိုအဖြစ်မရှိတော့ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးသားသမီးတို့အဘို့ထိုသူတို့အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်။ မှန်မှန်တိရစ္ဆာန်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာအဘယ်သူသည်, သူတို့ကလျင်မြန်စွာယဉ်ရယူပါ။ သူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ကိုင်ဆောင်သူလှောင်အိမ်ဖွင့် setting ထဲမှာဆော့ကစားနိုင်အောင်သင်, အမျိုးမျိုးချစ်ကြတယ်။ ဒါဟာတွင်းနှင့်စက္ကူအခြေအနေမျိုးနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ယာဉ်သေတ္တာများအပေါငျးတို့သကြွက်ကစားကွင်းရှိနိုင်ပါသည်။ Klickertrainings ၏အကူအညီနှင့်အတူသင်အလွယ်တကူပင်လှည့်ကွက်ကသူတို့ကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကြွက်သဘောထားကိုအတွက်အရင်ကဆိုရင်သည်ပြီးသားယဉ်တိရစ္ဆာန်များအဘို့ကိုဝယ်ယူသည့်အခါရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ သင်အမှန်တကယ်အလွန်ငယ်ရွယ်တိရိစ္ဆာန်များရှိသည်ဖို့လိုပါလျှင်, သူတို့ကယ့်ကိုယဉ်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူနေ့စဉ်နှင့်ပြင်းထန်စွာကိုင်တွယ်ရန်ရှိပါတယ်။ အထီးအများအားဖြင့်အမျိုးသမီးများထက်အနည်းငယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆက်ဆံနေကြပါတယ်။
ထို့အပြင်ရုတ်သိမ်းကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးသူငယ်အခကမရှိတော့စျေးမှာအတွက်ကြွက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလှုပ်ရှားမှုမှာ flinches သောတိရိစ္ဆာန်များ၏ကိုင်တွယ်၌ကျန်ကြွင်းသာအခါ, ကလှောင်အိမ်ကနေကြီးကြပ်မှုမပါဘဲကြွက်များကိုရောက်စေဖို့အချိန်ပါပဲ။
ဒါဟာဖြစ်လမ်းများမှတဆင့်ကြွက်သူတို့ပခုံးပေါ်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိစေသည်။ ဒီအဟောင်းများကိုသားသမီးတို့အဘို့မကြာခဏအေးဖြစ်ဟန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်တိရစ္ဆာန်များအဘို့ပြုလုပ်ရုံစိတ်ဖိစီးမှုပါပဲ။
ကြွက်အထူးလူမှုရေးအပြုအမူရှိသည်။ သူတို့ကအနည်းဆုံးတတိယကျင်းပကြသောအခါမှသာတကယ်ပျော်ရွှင်ဗူးတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းသဘောထားကိုတိရိစ္ဆာန်များမှရက်စက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းကျင်းပခဲ့သည့်အခါကြွက်သာယဉ်ဖြစ်ကြောင်း, တစ်ဘုံအထငျမှားဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအသိဉာဏ်ကြွက်အများကြီးအာကာသလိုအပ်ပါတယ်။ အလျားလိုက်ဘားနှင့်အတူကြီးမားတဲ့လှောင်အိမ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဥပမာ, ကြီးမားတဲ့ငှက် Aviary ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား built-in ကြမ်းပြင်နှင့်တက်ပြီးအလိုတော်နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်မိဘများနှင့်အတူလည်းအသစ်သောကြွက်များအိမ်ဟောင်းဗီရိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါ။
ကြွက်အစုံစားသတ္တဝါများဖြစ်ကြကြောင့် menu ကို, ရောထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဓိကအစားအစာဟာကြွက်ပြည့်စုံ feed ကို, အစေ့များနှင့်မျိုးစပါးတစ်ဦးအစာကျွေးခြင်းအရောအနှောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သေးငယ်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနေ့စဉ်လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ, ဒိန်ချဉ်, ကုန်ကြမ်းခေါက်ဆွဲ, ခွေးဘီစကွတ်များနှင့်ရံဖန်ရံခါအင်းဆက်ပိုးမွှားများအကြားတစ်ဦးအားရစရာအဖြစ်, ကဲ့သို့သောပုရစ်ဖြစ်ကြသည်။
ကြွက်များအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ထားရှိမည်မည်ဖြစ်ကြောင်း, ကို "ရဆေိုးကြွက်" သို့မဟုတ်အညိုရောင်ကြွက်နဲ့ဘာမှရှိသည်။ သူတို့ဟာသူတို့နေမကောင်းဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါသောတိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်ဓါတ်ခွဲခန်းကနေစမ်းသပ်ကြွက်များကနေမူလကဖြစ်ကြသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သူတို့ကဟောင်းမရှိကြပေ။ နှစ်နှစ်ပြီးသားငယ်ကြွက်တစ်ခုအသက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများဒါသေချာပေါက်သူတို့နောက်ဆုံးမှာသူမအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွင့် ယူ. ရန်ရှိသည်ဟုဆိုလိုလေ့လာပါ။ ကြောင်နှင့်ခွေးကိုကျော်ကာအားသာချက်အဖြစ်အများအပြားမိဘများအတွက်သောအရာကိုတစ်ဦးတိရစ္ဆာန်များမှကြွက်များနှင့်အတူအခြားတစ်ဖက်တွင်ရှည်လျားလွန်းမဟုတ်ခညျြနှောငျ။